Mila fandinihana lalina, fanapahan-kevitra malina… | NewsMada
Mila fandinihana lalina, fanapahan-kevitra malina…
Par Taratra sur 02/05/2018
Hanao ahoana ihany izao toe-draharaham-pirenena izao? Tsy hita be ihany aloha izay ho vahaolana: tsy mazava, tsy mampiombona, tsy azo antoka… Ny lalàm-pifidianana bontolo nolanina amboletra no fototra sy fositra. Mby aiza?
Andrasana izay ho fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC): hanaiky sa tsia ny fangatahan’ireo depiote ho an’ny fanovana ny fialan’ny filoham-pirenena noho ny tsy fananganana ara-potoana ny Fitsarana avo (HCJ)?
Tsy lavina, resabe tato ho ato ny amin’ny fisian’ny fandrahonana afitsoky ny tandapa sasany. Ady fiady io… Tomponandraikitra eo anatrehan’ny vahoaka sy ny tantara ny tena. Na hitondra ho amin’ny filaminana, na fikorontanana tanteraka…
Eo koa ny amin’ny fitarainan’ireo depiote ireo ny tsy maha ara-dalàna ny fomba amboletra nandaniana ny lalàm-pifidianana… Tsy misy resaka firy intsony? Tsy araka ny lalàmpanorenana izay raketiny. Inona no hataon’ny HCC?
Tsy vitan’izay, andrasan’ny maro koa izay ho vokatry ny fanadihadian’ny Bianco ny momba ny fisian’ny kolikoly tamin’ny fandaniana izay lalàm-pifidianana izay. Takina ny fampiharan-dalàna sy ny fanasaziana izay nanome sy nandray kolikoly.
Hanao ahoana ny amin’izay rehetra izay? Mba tsy hisy intsony ny tsy fanarahan-dalàna, ny fisian’ ny tsimatimanota, ny kiantranoantrano, ny kolikoly avo lenta… Ho zava-doza amin’ny tany raha izay antenaina ho vahaolana no hamoa-tsampona.
Mila fandinihana lalina, fanapahan-kevitra malina… Eny, na ny fanapahan-kevitra ny amin’ny fangatahana fametraham-pialana aza. Vitan’ny isa, roa, telo… tsy ampy antapitrisa? Politika io. Sao manasaro-javatra, vao hahita raharaha… amin’ny vahoaka?
Hanao ahoana ihany àry izao toe-draharaham-pirenena izao? Raha ny vahoaka, efa nangina sy nihetsika ary niaritra nandritra izay efa-taona mahery izay: tapa-kevitra matoa mitranga izao hetsika izao: tsy hay tohaina, mitohy, mihamafy…
Mila fandinihana lalina, fanapahan-kevitra malina… amin’izao fidirana amin’ny volana mey izao.